Zavakanto maoderina manomboka amin'ny surrealism ka hatrany amin'ny zavakanto maoderina | Famoronana an-tserasera
Ny tontolon'ny zavakanto maoderina mahavariana, manomboka amin'ny surrealism ka hatramin'ny zavakanto maoderina
Ny zavakanto maoderina dia heverina fa lasa hatramin'ny faran'ny taonjato faha-70 ka hatramin'ny XNUMX tany ho any. Avy amin'ny impressionism (izay nahaterahana ny zavakanto maoderina), hatramin'ny minimalism (izay mifarana), hanohy hizaha ny sasantsasany amin'ny hetsik'izy ireo izahay, toa ny efa nataonay tamin'ny a lahatsoratra teo aloha, izay manomboka amin'ny impressionism ary tonga amin'ny dadaism.
Amin'ity tranga ity dia hanomboka amin'ny surealisme isika, aorian'ny Dadaism, mandra-pahatongantsika amin'ny minimalism. Ho hitantsika ihany koa ireo hetsika taty aoriana, toy ny postmodernisme, tonga amin'ny zavakanto ankehitriny. Inona no andrasanao hampilentika ny tontolo mahaliana amin'ny kanto maoderina? Andao hanomboka!
1 Ny tsy azo antoka
2 Fanehoan-kevitra manintona
3 Zavakanto Pop
6 Kanto Povera na zavakanto mahantra
9 Zavakanto ankehitriny
Ny tsy azo antoka
Mampiasa ny fomba fiteny hoe "surreal" ity ny tsirairay, ka azontsika atao ny mamantatra kely ny momba an'io hetsika mahaliana io. Miaraka amin'i Salvador Dalí ho mpanentana lehibe indrindra, ny surealisme dia mifototra amin'ny fiainana tampoka sy ny tontolon'ny tsy mahatsiaro tena. Io hetsika io no mahatonga ny nofy ho lasa zava-misy. Raha ny raharaha Dalí dia tsy maintsy asongadintsika izao tontolo izao an'ohatra lehibe. Ohatra, ny atody dia nampiasainy ho mariky ny fiainana sy ny fanantenana, ny valala ho mariky ny faharatsiana, ary ny elefanta manana tongotra matevina ho mariky ny tsy fandanjana.
Ilay sary hosodoko voalohany heverina ho expressionism abstract dia avy amin'ilay Jackson Pollock malaza. Ny asan'ity hetsika ity dia miavaka amin'ny endrika lehibe tokoa, aiza afaka manandrana ny mpanakanto amin'ny alàlan'ny fanipazana sy ny famafazana loko (ara-bakiteny) eo amin'ny lamba, manome lanja ny fihetsiky ny olona manao ilay asa. Sary hosodoko "ara-batana" izy io, izay maneho ny fahatsapan'ny mpanakanto rehefa nandoko azy.
Ity hetsika mahaliana sy maro loko ity mahazo ny haja ambony indrindra avy amin'ny tanan'i Andy Warhol, araka ny efa nolazainay amin'ity lahatsoratra teo aloha ity. Teraka teo amin'ireo mpanakanto reraka noho ny fahaizana ara-tsaina be loatra ny zavakanto izy io, izay tsy dia azon'ny olona loatra. Araka izany, zavakanto toa mangatsiaka sy tsotra izy io izay mampiasa ny zavatra ampiasain'ny mpanjifa ho dokam-barotra, ho fanoherana ny fiaraha-monina elitista sy mpanjifa.
Tsy miresaka hatsarana intsony ny zava-kanto fa ny hevitraNoho izany, ity hetsika ity dia mampiasa ireo zavatra novokarina betsaka ho toy ny asa izay mampita hevitra amintsika, manala azy amin'ny toe-javatra mahazatra azy. Ka ny "konsep" no zava-dehibe. Marcel Duchamp, rain'ny Vonona vonona, amin'ny alàlan'ny fampiasana zavatra isan'andro tsy ivelan'ny sahan'endrika, hahafeno azy ireo ho sangan'asa. Iray amin'ireo sanganasa malaza indrindra ataony i Ny loharano, izay urina porselana ampiasaina amin'ny sary sokitra.
Ity hetsika hafahafa ity te handresy ny fetran'ny fampiasana ny lamba canvas amin'ny lalana, mandeha lavitra kokoa. Ohatra, ny fampiasana vatan'olombelona ho borosy.
Kanto Povera na zavakanto mahantra
Hetsika iray hafa manohitra ny fiarahamonin'ny mpanjifa. Ny zava-kanto mahantra dia mampiasa zavatra fototra, toy ny lamba rovitra, magazine na zavatra hitantsika ao amin'ny fako.
Minimalism dia ny hetsika mamarana ny zavakanto maoderina. Miorina amin'ny kely kokoa dia bebe kokoa. Amin'ny alàlan'ny tarehimarika tsotra sy mangatsiaka, ny tanjona dia ny hampita fa ny tena zava-dehibe dia izay tena ilaina, manala ny fanjifana ivelany rehetra. Amin'izao fotoana izao dia nanjary lamaody indray izy io ankoatry ny sary hosodoko sy ny maritrano, amin'ny alàlan'ny tanan'ny Japoney Marie Kondo, filozofia marina amin'ny fiainana.
Ary inona no hitantsika ao ambadiky ny kanto maoderina?
Tsy toy ny minimalista, postmodernists dia mino fa ny sary ambonimbony ihany no tena manandanja. Amin'izay fotoana izay dia maro ny hetsika teo aloha no mifangaro, tsy avy amin'ny zavakanto maoderina ihany, fa avy amin'ny zavakanto ankehitriny sy avy amin'ny vanim-potoana tantaran'ny zavakanto.
Ny zavakanto amin'izao fotoana izao dia mamaritra ny tenany isan'andro. Misongadina ny endrika fialamboly iray amin'izany, hiresahana mpihaino manokana, amin'ny sanda hafa. Raha tsy maintsy asongadinay ny mpanakanto ankehitriny dia tsy isalasalana fa Banksy sy ny fiheverana ny zavakanto an-tanàn-dehibe (afaka mianatra bebe kokoa momba azy ianao amin'ity lahatsoratra teo aloha ity).
Ary ianao, inona ny hetsika fantatrao indrindra?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ny tontolon'ny zavakanto maoderina mahavariana, manomboka amin'ny surrealism ka hatramin'ny zavakanto maoderina
Mpaka sary izay hahatonga anao hanalavitra amin'ny fampiasana makro
Jereo ny hetsika voalohany nanome aina ny zavakanto maoderina